Kooxda Manchester United oo bartilmaameedsanaysa labo ka mid ah xiddigaha Juventus – Gool FM
Haaruun May 26, 2020
(Manchester) 26 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa la soo warinayaa inay bartilmaameed ka dhiganayso labo ka mid ah xiddigaha naadiga reer Talyaani ee Juventus.
Labada ciyaaryahan ee Juventus, Merih Demiral iyo Douglas Costa ayaa la soo warinayaa inay bartilmaameed u yihiin kooxda Manchester United.
Iyadoo kooxda reer Talyaani la sheegay inay isha ku heyso inay dib ula midoobaan Paul Pogba, tiro ciyaartoy ah ayaa la sheegay in loo ogolaan doono inay ka baxaan Turin inta lagu jiro suuqa soo socda.
Sida laga soo xigtay Tuttosport, taasi waxay keentay in Man United ay weydiiso Juventus haddii ay diyaar u yihiin inay iska iibiyaan Demiral iyo Costa.
Daafaca dhexe ee Demiral ayaa bartilmaameed waxa uu u ahaa Kooxda Leicester City, xilli kooxda Juventus uu u saftay kaliya 7 kulan xilli ciyaareedkan ka hor inta uusan dhaawac halis ah jilibka ka gaarin bishii Janaayo.
Dhanka kale Costa oo 30-sano jirsanaya bisha Sebtember ayaa ku guul-darreystay inuu bandhig soo jiidasho leh sameeyo tan iyo markii kooxda reer Talyaani ay bixisay 35.2 milyan oo gini ay kula soo saxiixday xagaagii 2018.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in Man United aysan dooneynin in xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Brazil lagu daro heshiis kasta oo la xiriira Paul Pogba.
'Drogba nasiib ayuu lahaa haddii uusan wajihin isaga' - Henderson oo Van Dijk ka difaacay weerarkii kaga yimid Ballack